05 / 01 / 2021 06 / 01 / 2021 အာဒံ Basch 1532 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၆ Colosseum, 21315 Pop Up စာအုပ်, 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, The Beatles ၃၁၁၉၈, Lego
Brick Fanatics သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအချို့တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံများကိုသရုပ်ဖော်ထားသည် Lego အစုံ။
ယူကေတွင်အသစ်သောသော့ခလောက်များတပ်ဆင်ထားပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကန့်သတ်ချက်များဆက်လက်ရှိနေခြင်းဖြင့်သင်သည်တယ်လီဖုန်းရှေ့တွင်နောက်တဖန်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးနေရလိမ့်မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီအရည်အသွေးအချို့ရဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည် Lego အစုံတည်ဆောက်ထားသည်။
ကျနော်တို့ထိပ်တန်းရုပ်ရှင်ငါးခုကိုရွေးပြီးပြီ Lego ပူးတှဲ (ရှောင်ရှား။ ) Lego Star Wars, ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Jurassic World သူတို့မဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့စကားပြောအဖြစ်အစုံ။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုချင်းစီကိုလက်ရှိပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန်ရရှိနိုင်သည်
၁ (Amazon Prime)
Gladiator ကဲ့သို့မော်ကွန်းရုပ်ရှင်တစ်ခုသည်လည်းအလားတူမော်ကွန်းတစ်ခုလိုသည် Lego အစုံ ရာမ ၁၀၂၇၆ Colosseum သင်တန်း၏ပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာရုပ်ရှင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများစွာရဲ့တည်နေရာဖြစ်တဲ့ Colosseum of Rome ဆိုတဲ့အံ့ detail စရာကောင်းတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်ဖန်တီးထားပါတယ်။
အချောပုံစံကိုကြည့်ပြီး Maximus ကိုချက်ချင်းမစဉ်းစားရန်၊ ကျားတစ်ကောင်နှင့်အခြား gladiator များနှင့်ဓားကိုဆန့်ကျင်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရန်ခက်သည်။ ၉,၀၃၆ အပိုင်းအစများမှာသင်မပြီးခင် Gladiator ကို ၁၀ ကြိမ်လောက်ကြည့်ဖို့အချိန်ရလိမ့်မယ်။
2. Muppets ဘဏ္asureာရေးကျွန်း (Disney+)
မယုံနိုင်စရာပါပဲ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြက Muppets Treasure ကျွန်းဖြစ်ရမယ်။ နောက်ထပ်အဓိကပင်လယ်ဓားပြဂိမ်းသင်တန်း၏နေစဉ် Disney+ Muppets သာလျှင်ဤအစုအဝေး၏ Titan တစ်လျှောက်လုံးတွင်ပြသသောကျက်သရေ၊
Long John ၏ဂိုဏ်း၏ကံဆိုးရှာသောပင်လယ်ဓားပြများသည်ဤနေရာတွင်ရှိနေပြီး Captain Redbeard's ကကိုယ်စားပြုသည် Lego သင်္ဘောသား။ အစိမ်းရောင်ဖားလေးတစ်ကောင်ဟာလှေအောက်မှာပုန်းနေပြီး Kermit ကိုမျက်လုံးပြူးနေတာလား။ Miss Piggy ၏ဇာတိဝက်သည်တောင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းတွင်ဝက်နှင့်ပါ ၀ င်သည်။
3. ပြတိုက်မှာည (Disney+)
T-rex အရိုးစုသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရှင်သန်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးပါ Lego Ideas အစုံ, 21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း.
ဤသည်အပြုသဘောပြတိုက်ရုပ်ရှင်မှာညအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့သည်။ ဒီပစ္စည်းပစ္စယသည်လေထုကိုအမှန်တကယ်ဖမ်းယူနိုင်ရန်ပြတိုက်စတိုင်ပြသထားသည့်နံရံများနှင့်နာမည်ပြားများပါ ၀ င်သည်။ မျှော်လင့်ပါတယ် Lego ဒိုင်နိုဆောသည်၎င်း၏ရုပ်ရှင်နှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေပါလိမ့်မည်artအသက်ပြန်ရှင်လာသင့်တယ်
4. မနေ့က (Amazon Prime)
မနေ့ကငါ့ရဲ့ပြallနာတွေအားလုံးကဒီလောက်ဝေးနေပုံရတယ်။ ပြီးတော့မင်းကချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးဖြုန်းတီးလိုက်မယ် Lego Art အစုံ, The Beatles ၃၁၁၉၈, perfectlyုံနှင့်အတူတွဲ အမေဇုံ မနေ့က
ကမ္ဘာကြီးသည်ဤရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသော rom-com တွင် Beatles ကိုမေ့နေခဲ့ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အုတ်ပုံစံဖြင့်ကျင်းပသောကြောင့်သင်အမှန်ပင်ထိုသို့ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အစုံသည်နံရံပေါ်တွင်ဂုဏ်ယူစွာမပြမီ John, Paul, Ringo သို့မဟုတ် George တို့၏မျက်နှာကိုပြန်ဆိုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဝုဒ်သို့5(Disney+)
21315 Pop-Up စာအုပ် လှလှပပပု recreates classic in Jack နှင့် Beanstalk နှင့် Red Red Riding Hood တို့၏ပုံပြင်များ Lego ပုံစံ။ ဤဇာတ်ကောင်ပုံပြင်များကိုရောနှောထားသောနတ်သမီးပုံပြင်ကမ္ဘာထဲသို့ ၀ င်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ရုပ်ရှင်လှုပ်ရှားမှုသည် Jack နှင့် Little Red အကြားပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှသင်ပြောင်းလဲနိုင်သောပုံပြင်ပြသမှုနှင့်အတူသင်လိုက်နာနိုင်သည်။ The Lego အဖွဲ့သည် Collectible Minifigure စီးရီးများမှတဆင့်ရုပ်ရှင်၏အခြားနတ်သမီးပုံပြင်များစွာကိုလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သဖြင့်သင်အားလုံးကိုထည့်နိုင်သည်။
← LEGO Modular အဆောက်အအုံများစုဆောင်းခြင်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: Mass Mando →